Shijiazhuang Tianqiao zokushisela Izinto Co., Ltd.
Shijiazhuang Tianqiao zokushisela Materials Co., Ltd yasungulwa ngo 2007 elise amakhilomitha 30 eningizimu-ntshonalanga shijiazhuang. Umgwaqo wethu wefektri ulula kakhulu amakhilomitha angama-20 entshonalanga yomgwaqo omkhulu kazwelonke we-107, futhi eduze nomgwaqo omkhulu weShixing noJingzan. Sinamandla obuchwepheshe aqinile, imishini ephelele yokuhlola umkhiqizo ukuze sikwazi ukugcina ikhwalithi yomkhiqizo ozinzile. Inkampani yethu yakhiwe ngumnyango wezokukhiqiza, umnyango wezobuchwepheshe, umnyango we-R & D, i-QC & Laboratory, umnyango we-Sale, umnyango we-Logistic. Siphinde sidlule ukuvunyelwa kohlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9001: 2008.
Imikhiqizo yethu ifaka izinhlobo zama-electrode ezishisayo ezinomkhiqizo we- "Yuanqiao", "Changshan", njenge-carbon steel, i-Iow alIoy steel, izinsimbi ezingamelana nokushisa, insimbi enezinga lokushisa eliphansi, insimbi engagqwali, insimbi yensimbi, ama-electrode e-welding aqinile. Zonke izinhlobo zokugeleza oku-sintered nezinhlobo ezahlukahlukene zensimbi ye-welding kanye ne-powder ehlukahlukene yokuxhuma Imikhiqizo yethu inokusebenza okuhle kakhulu, ikhwalithi ezinzile, ukubumba okuhle kwe-welding, ukususwa okuhle kwe-slag, ikhono elihle lokumelana nokugqwala, iStomata kanye nokuqhekeka, okuhle nokuqinile okuzinzile kwensimbi yemishini yokusebenza.Imikhiqizo yethu inokusebenza okuhle, ikhwalithi ezinzile, ukubumba okuhle kwe-welding, i-slag enhle ukususwa, ikhono elihle lokumelana nokugqwala, iStomata nokuqhekeka, ukusebenza okuhle nokuqinile okuzinzile kwemishini yensimbi.
Imikhiqizo isetshenziswa kabanzi emikhakheni ehlukahlukene yezomnotho we-nationaI, njengemishini, insimbi, imboni yamakhemikhali kaphethiloli, i-boiler, ingcindezi yomkhumbi, imikhumbi, izakhiwo, amabhuloho, njalonjalo, Imikhiqizo ithengiswa kulo lonke izwe, futhi itholwe abasebenzisi abakhulu.
Imikhiqizo yethu iphelele ngekhulu lamakhulu futhi ithengiswe umhlaba wonke, ikakhulukazi e-US, Europe, South America, Australia, Africa, Middle East, Southeast Asia and etc. Imikhiqizo yethu ihlangabezana namakhasimende amukelekile ngokufudumele ngenxa yekhwalithi enhle kakhulu, ukuvelela okuvelele nentengo yokuncintisana .
Ngaphansi komoya "Wekhwalithi ephezulu, ukwethembeka, ukuwina-win ukubambisana", sizimisele ukufeza ukuthuthukiswa okuvamile futhi senze ubuhlakani nawo wonke amakhasimende. Sibheke phambili ekudleni ukusizakala ngokuhlanganyela, ubudlelwano besikhathi eside nozinzile namakhasimende nabasabalalisi emhlabeni wonke. Sikholwa ukuthi singafinyelela ikusasa elihle ngemizamo yethu ngokubambisana.